११ वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण प्रकाशित, कसको नाफा कति? | Nagarik News - Nepal Republic Media
११ वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण प्रकाशित, कसको नाफा कति?
काठमाडौं-चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका अधिकांस वाणिज्य बैंकको नाफामा वृद्धि भएको छ। मुलुकमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा रहेकोमा हालसम्म ११ बैंकले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका हुन्।
चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण प्रकासित गरेका बैंकमध्ये माछापुच्छ्रेबैंकको आठ करोड र नविल बैंकको करिब चार करोड रुपैयाँ खुद नाफा घटेको जनाएका छन्।
ग्लोबल आइएमई बैंकले चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। उक्त नाफा गत आवको तुलनामा करिब ८३ करोड रुपैयाँले बढी हो।
बैंकले गत आवको सो अवधीमा करिब एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २२ दशमलव १६ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय ५० दशमलव ६५ रुपैयाँ रहेको छ।
एभरेष्ट बैंकले चालु आवको तेश्रो त्रैमासमा करिब दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। उक्त नाफा गत आवको सोही अवधीको तुलनामा करिब १४ करोड रुपैयाँले बढी हो। बैंकले गत आवको सोही अवधिमा दुई अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो।
हाल बैंकको चुँक्ता पूँजी करिब आठ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोषमा सात अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
हिमालयन बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधीमा करिब दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।
उक्त रकम गत आवको सोही अवधीको तुलनामा करिब २९ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बढी हो। बैंकले गत आवको सो अवधिमा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो।
प्राइम कर्मशियल बैंकले चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा करिब दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। बैंकले कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ती (एक्विजीसन) गरी गत फागुन २९ गतेवाट एकीकृत कारोबार सूरु गरेको थियो।
बैंकको उक्त नाफा गत आवको सोही अवधीको तुलनामा करिब साढे ४८ करोड रुपैयाँ बढी हो। बैंकले गत आवको चैत मसान्तसम्म एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो।
त्यसैगरी, बैंकले सो अवधीमा एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी करिब एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको बैंकले जनाएको छ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १९ दशमलव ३६ रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय ४४ दशमलव ६२ रुपैयाँ छ।
बैंकले सो अवधीमा एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ। हाल बैंकको चुक्ता पूँजी आठ अर्ब ४१ करोड, जगेडा कोषमा एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी, बैंकले सो अवधीमा ५८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी गरेको छ भने करिब ५८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७७ १७:४६ बुधबार